#ThrowbackThursday - ဓာတ်ဆီဆိုင်
ကြာသပတေးနေ့ #TBT Throwback အင်္ဂါရပ်များ
10 / 03 / 2016 10 / 03 / 2016 ကြွယ်ဝသော 1433 Views စာ3မှတ်ချက် #နောက်ကြောင်းပြန်သောကြာနေ့, 1980, 1983, 1986, 1988, 1992, 2007, City, Classic, Octan ပါ, အခံွ, မြို့
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ငါတို့ဟာဒီစက်ရုံတစ်ခုထက်ပိုပြီးကြည့်နေကြပါပြီ။ ဒီနွေရာသီမှာအသစ်စက်စက်အသစ်ရောက်လာတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် City set - 60132: ဝန်ဆောင်မှုဘူတာ။ ဒါကကျွန်တော်တို့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ခဲ့တဲ့ဓါတ်ဆီ / ဓာတ်ဆီ / ၀ န်ဆောင်မှုရုံပါ။ ဒါပေမယ့်အဲဒါနဲ့မတူတာတခုခုသတိပြုမိခဲ့တယ် classic အတိတ်၏အစုံခြေရင်းပန်းကန်ပါ! ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါစိတ်ထဲဘယ်တော့မှပြန်သွားဖို့ကောင်းတယ်ထင်ခဲ့တယ် Lego နှစ်များတစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးဘူတာများကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်စားသုံးသူသည်မည်သည့်အရာနှင့်နှစ်သက်သည်ကိုသိသည်။
သတိပြုရမည်မှာဤသည်ကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့သမျှအားလုံးမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်ထင်သောအရာများသာဖြစ်သည်ကိုသတိပြုပါ Lego မှာအလွန်ကြီးစွာသောအလုပ်နှင့်အားလုံးတစ်ခုခုလုပ်ခဲ့တယ် အသစ်အစုံ ထက်ပိုကောင်းတဲ့ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်သင့်ပါတယ်။ ဒီနွေရာသီမှာထွက်လာမယ့်သူတွေထက်ဒီအရာအားလုံးကပိုကောင်းတယ်လို့မင်းသဘောတူမယ်လို့ငါထင်တယ်။
6375: Exxon ဓာတ်ဆီဆိုင် - 1980
ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်မှမွေးဖွားခြင်းမတိုင်မီ ၂ နှစ်မှစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Exxon ဓာတ်ဆီဆိုင်ဖြစ်သည်။ Gas / Petrol - သင်ခေါ်ဆိုသည့်နေရာတွင်သင်နေထိုင်သည့်နေရာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သို့သော်၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်တာဝန်ရှိသူနှင့်သာသက်ဆိုင်သည် Lego အမည်များ။ ၎င်းသည်အမေရိကန်မှသာလက်လီရောင်းဝယ်မှုဖြစ်ပြီး ၂၆၇ စဖြစ်သည်arts,3minifigures နှင့် All- အရေးကြီးသော baseplate ။ ဤမီးခိုးရောင်မီးခိုးရောင်အဟောင်းများသည်နှစ်ဖက်စလုံးကိုတည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးမကြာမီကျွန်ုပ်ထင်သည် Lego ဤအ p ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်မေ့လျော့ကြပြီarts ကိုငယ်ရွယ်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ ငါ့အတွက်မီးမောင်းထိုးပြခြင်းသည်ဘွိုင်ဘွိုင်အားစုပ်စက်တွင်ဖြည့်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် Bricklink ပေါ်ရှိအသုံးအနှုန်းများကိုပေါင် ၅၀ အထက်မှရွေးချယ်နိုင်သည်။ ငါ MISB ဗားရှင်းရောင်းတဲ့သူကိုရှာမတွေ့ဘူး
6371: Shell Service Station - ၁၉၈၃
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည် (၃) နှစ် (၁၉၈၃) ကိုရှေ့တိုးချဲ့ပြီး Shell service station မှာ ၂၆၁ စရှိသည်arts နှင့်အခြား3minifigures ။ ဤတစ်ကြိမ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနှင့်မျက်နှာပြင်၊ ကားနှင့်ပိုက်ထရပ်ကားများတပ်ဆင်ထားပြီး၊ ထိုစက်ရုံတွင်ရှယ်လ်အမှတ်တံဆိပ်သည်စုပ်စက်များ၊ ဘူတာရုံ ၀ န်ထမ်းများနှင့်ဆိုင်းဘုတ်များတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ငါကားရှေ့ခန်းရှေ့ခေါင်မိုးပေါ်ကခေါင်မိုးကိုကြိုက်တယ်၊ ကားကပန့်တွေထဲကိုဆွဲတင်မယ့်ကားတွေအတွက်ပုံစံအသစ်နဲ့ပုံစံအသစ်ဖြစ်တယ်။ ၁၉၈၃ မှာ RRP နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်ကိုကျွန်တော်ရှာမရခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့သုံးနေတာဟာသင့်ကိုအနည်းဆုံး£ ၂၈ ပြန်ပေးဆပ်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်တဖန်အဘယ်သူမျှမ Bricklink အပေါ် MISB ဗားရှင်းရောင်းချခဲ့သည်။
6378: Shell Service Station - ၁၉၈၃
နောက်ထပ် ၃ နှစ်နှင့်ဘူတာအသစ်တစ်ခု ဤအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၉၁ စရှိသည်arts ပေမယ့်နှစ်ခုသာအသေးစားနှင့်အသစ်တစ်ခုကိုဆွဲကုန်တင်ကား။ ထရပ်ကားသည် '2 မော်ဒယ်အတွက်အဓိကတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘူတာရုံကိုယ်နှိုက်ကသာ ၂ စုံသာတွေ့မြင်ရသည့်အောက်ခံပြားအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပန့်များကိုရှေ့ပိုင်း၏အလယ်တွင်ရောက်ရှိစေပြီးဘူတာရုံကိုပိုမိုခေတ်မီစေသည်။ ဒါဟာငါခံစားခဲ့ရသောအရာပဲ၊ ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးအပိုင်းကကားဂျက်ပါ။ ၎င်းသည် '83 တွင်ဒေါ်လာ ၂၅.၅၀ ဖြင့်ပြန်လည်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးယခုအသုံးပြုသောပစ္စည်းအတွက်အနည်းဆုံးပေါင် ၃၀ ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သင် MISB တစ်ခုကိုလိုချင်လျှင်£2သုံးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ !!!
6397: သဘာဝဓာတ်ငွေ့ N '' ရေချိုး Express - 1992
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ထပ်ရွေးချယ်မှုအဘို့ကျနော်တို့ Octan- ရေးရာဘူတာရုံနှင့်အတူ 90s သို့ရွှေ့။ 470 p နှင့်အတူထုပ်ပိုးartကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံး ၃ စုံကိုမှေးမှိန်သွားစေတယ်။ အသေးစားဓာတ်ပုံအသေးစား၊ ထရပ်ကားနှစ်စီးနှင့်ကားတစ်စီးလည်းပါ ၀ င်သည်။ သင်တို့သည်လည်းဤအစုံအတွက်ကားရေဆေးမှတဆင့်သွားရ။ အခြေခံပြားသည်မြက်ပင်အတွက်အစိမ်းရောင်နှင့်အလယ်တွင်မီးခိုးရောင်ပုံနှိပ်ထားသောလမ်းနှင့်နောက်တဖန်ခြားနားသည်။ '3 သတ်မှတ်ချက်ကဲ့သို့ပင်ပန့်များသည်လမ်းအလယ်တွင်ရှိသည် ဖြစ်၍ သင်သည်နှစ်ဖက်စလုံးမှဖြည့်နိုင်သည်။ ဆိုင်ကိုပန့်များနှင့်ဆက်သွယ်ပေးသော OTT ခေါင်မိုးကိုလည်းသင်ရရှိသည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၂ ဒေါ်လာဖြင့်ပြန်လည်ရောင်းချခဲ့သည်။ အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းကို£3ကျော်လောက်ရောင်းပြီး MISB က Bricklink မှာပေါင် ၁၀၀ လောက်ပဲရှိတယ်။ ဒါကြောင့်သင် Octan station တစ်ခုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကသင့်တော်တဲ့ရွေးချယ်မှုပါ။
7993: ဝန်ဆောင်မှုဘူတာ - 2007
ငါတို့သာ City ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးထားပြီးနောက် 2007 နှစ်ခန့်, 15 ကနေရွေးပါ။ Gone သည် tow truck ဖြစ်သည်။ သို့သော်အောက်ခြေ၌နောက်ခံပြားတစ်ခုထည့်ထားသော်လည်းခေတ်သစ်မှောင်မိုက်မီးခိုးရောင်ဖြစ်သည်။ ဘူတာရုံတွင်စုပ်စက်တစ်ရုံ၊ အမိုးသေးသေးနှင့်ကားဂျက်မပါသောကြောင့်ဖြစ်သည်artပညာရှိစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံး ၄၇၀ မှ ၄၀၂ သို့ကျဆင်းသွားသည်၊ သို့သော် ၃ ခုခွဲခြားထားသည်။ လက်လီစျေးနှုန်းသည်ပေါင် ၂၉.၃၅ / ဒေါ်လာ ၃၉.၉၉ ဖြစ်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၎င်းသည်ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ခဲ့သောအစုများထဲမှအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ ပေါင် (၂၅) အောက်နှင့် MISB ကိုပေါင် (၄၀) ကျော်ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်သည်။ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေပိုကောင်းတယ်လို့ထင်ပေမယ့် 470 version ကအားနည်းနေတုန်းပဲ။
ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ၁၉၈၈ ကနေအကောင်းဆုံးဘူတာရုံဖြစ်ဖို့လိုတယ်။
6394: Metro Park & ​​Service Tower
တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနှစ်ခုပြားနှင့် ၆၂၀ အပိုင်းအစနှစ်ခုဖြင့်ပါ ၀ င်လျှင်၎င်းသည်အန္တိမဖြစ်သည် Lego ဘူတာရုံနှင့်ငါအလွန်သံသယတစ်ခုခု Lego အစဉ်အဆက်ကဒီစကေး (အနီးဆုံး) မှာနောက်တဖန်ပြုလိမ့်မည် Lego ရတယ် 4207: City ကားရုံ 2012 မှ) ။ '88 မှာပြန်တပ်ဆင်ခဲ့တာကဒေါ်လာ ၅၈.၂၅ ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့မှာ ၆ ခု၊ ကား ၃ စီး၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ထရပ်ကားနှစ်စီးရတယ်။ နောက်ထပ်မှာကားအပြည့်ပါသောကားရပ်နားရန်နေရာတစ်ခုရှိပြီးနောက်တစ်ခုမှာကားတစ်စီးနှင့်ကားများပါရှိသည်။ ငါ့အတွက်ဒီအစုံမှာမင်းအတွက်မင်းလိုချင်တာအားလုံးရှိခဲ့တယ် city။ သငျသညျတစုံတခုကိုရခဲ့လျှင်, ဤသူသည်ငါ၏ရွေးပါလိမ့်မယ်။ တစ်ပတ်ရစ်ဗားရှင်းကသင့်ကို£ 50 ဒေသသို့ပြန်ပို့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် MISB အတွက်တော့တကယ့်ကိုအံ့သြစရာကောင်းလောက်တဲ့ပေါင် ၂,၁၁၁.၆၀! အုတ်ခဲပေါ်မှာ။
ဒီတော့အဲဒီမှာသင်နှစ်ပေါင်းများစွာဘူတာကိုပြန်ကြည့်ပါ။ ငါပိုကောင်းတဲ့မဆိုလွဲချော်ထင်ပါသလား သင့်တွင်ထိုအရာတစ်ခုခုကိုသင်ပိုင်ဆိုင်ပြီးပါကသင့်အမှတ်တရများကားအဘယ်နည်း။
← LEGO သိပ္ပံ -Fi Megastructures infographic
Lego Marvel Avengers level packs & DLC ကိုယခုရရှိနိုင်ပါပြီ →
အပေါ်အတွေး ၁၂၂ ခု#ThrowbackThursday - ဓာတ်ဆီဆိုင်"
ငါ 6371 ရပြီ!
ငါ LEGO ကသူတို့ကိုခြံထဲကိုပြန်ပို့ပေးချင်တယ် Cityscape - သူတို့ကောင်းကောင်းရောင်းမယ်ဆိုတာငါသိတယ်။
အခုတော့တစ်ဦး classic ပြန်လည်သုံးသပ်အင်္ဂါရပ် Ace ပါလိမ့်မယ်!
ဒါကကျွန်တော့်အချက်ပဲ။ ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ ၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များမှအစုံသည်ယနေ့ခေတ်ထက်များစွာပိုကောင်းသည် city အစုံ။ LEGO အစုံအတွက် baseplates ပြန်ယူလာ !!!
ငါအချိန်အနည်းငယ်ရရန်ကြိုးစားခဲ့လျှင်၎င်းကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ခြင်းရှိမရှိကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်arts bin ဟာဆိုင်တစ်ဆိုင်လုံးမှာရှိပြီး ၈၀ စုံလုံးကိုကွဲပြားခြားနားတဲ့သိုလှောင်မှုနဲ့အမျိုးအစားခွဲခြားမှုတွေနဲ့ပေါင်းစည်းလိုက်တဲ့အတွက်ငါတကယ်စီစဉ်ထားဖို့လိုတယ်။